Tantara: Ny Fomba Hahavelomantsika Mandrakizay - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
AZONAO lazaina ve izay vakin’ilay zazavavy kely sy ireo namany? Eny, izany dia ny boky izay vakinao koa: Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly. Ary eo am-pamakiana ny tantara izay vakinao izy ireo: “ Ny fomba hahavelomantsika mandrakizay .”
Hitanao ve ilay boky hafa eo amin’ny tany? Ny Baiboly io. Asaivo misy olona mamaky aminao ireo tapany ao amin’ny Baiboly izay iorenan’ireo ﬁtantarana ato amin’ity boky ity. Ny Baiboly dia manome antsika ny fanazavana feno ilaintsika mba hahafahantsika rehetra hanompo an’i Jehovah amin’ny fomba tsara ka hahazo ny ﬁainana mandrakizay. Koa tokony ho zatra ny hianatra ny Baiboly matetika isika.
Nefa tsy ampy ny ﬁanarana fotsiny momba an’i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Mety hanana fahalalana be dia be ny amin’izy ireo sy ny fampianarany isika, nefa tsy hahazo ny ﬁainana mandrakizay. Fantatrao ve izay mbola ilaina?
Ilaintsika koa ny miaina mifanaraka amin’ny zavatra ianarantsika. Tadidinao ve i Jodasy Iskariota? Iray tamin’ireo 12 izay noﬁdin’i Jesosy mba ho apostoliny izy. Nanana fahalalana be dia be momba an’i Jehovah sy Jesosy i Jodasy. Nefa inona no nitranga taminy? Taoriana kely dia tonga tia tena izy, ary nanolotra an’i Jesosy tamin’ny fahavalony tamin’ny sekely volafotsy 30. Koa tsy hahazo ny ﬁainana mandrakizay i Jodasy.
Ankoatra ny ﬁanarana momba an’i Jehovah sy Jesosy, inona koa no ilaina hatao mba hahazoana ﬁainana mandrakizay?
Ahoana no ampisehoan’ny Baiboly fa ny hoe mandray fahalalana momba an’i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy, dia tsy midika hoe mitadidy ny zavatra ianarana fotsiny? (Matio 7:21; Jak. 2:18-20; 1 Jaona 2:17)